Xildhibaanada Barlamaanka oo edeymo dhowr ah loo soo jeediyey – iftiin fm
Xildhibaanada Barlamaanka oo edeymo dhowr ah loo soo jeediyey
Waxaa manta daboolka laga qaaday warbixinta sanadla ah ee ka hadleysa waxqabadka xildhibaanada barlamaanka 12-aad ee dalka
Warbixintani oo ay soo saartay hey’adda Mzalendo ayaa waxaa lagu sheegay in qaar ka mid ah xildhibaanada barlamaanka waxqabadkooda uu aad iyo aad uu hooseyso marka ay ku jiraan barlamaanka.
Tirada Xubnaha Barlamaanka ee aan rayigooda ku darsanin doodaha hadd iyo jeer ka dhax dhacaan barlamaanka gudahiisa ayaa aad iyoo aad uu badan sida lagu sheegay warbixintani saaketo la soo saaray .
Ku dhawaad 21 xildhibaan ayey warbixinta Mzalendo sheegtay in ay ku guul dareysteen in ay rayigooda ama aragtidooda ay ka dhibtaan doodaha ka dhax dhaca barlamaanka gudahiisa.
Labo ka mid ah xildhibaanadani ayaa kala ah xildhibaanka laga soo doortay deegaan barlamaaneedka Kapsaret Oscar Sudi iyo dhigiisa galbeedka magaalada Nakuru Samuel Arama.
Warbixintani ayaa waxaa lagu sheegay in laga soo bilaabo sanadkii 2017-kii labadani xildhibaan ay ku guul dareysteen in ay rayigooda ama aragtidooda ay ka dhibtaan doodaha ka dhax dhaca barlamaanka gudahiisa.
Xildhibaanada kale ayaa kala ah mudana laga soo doortay konfurta Isiolo Abdi Tepo, xildhibaanka laga soo doortay deegaanka Balambala Abdi Shurie, Xildhibaanka laga soo doortay degmada Tarbaj Ahmed Gacal, mudanaha laga soo doortay deegaanka galbeedka Mumias Johnson Naicca iyo dhigiisa ee laga soo doortay bariga laikipia Amin Deddy .
Dhanka kale warbixinta ay soo saartay hey’adda Mzalendo Trust ayaa lagu sheegay in xildhibaanada waxaqabadkooda uu sareeyo gudaha barlamaanka ay kala ah xildhibaanadda laga soo doortay waqoyiga Suba Millie Odhiambo, xildhibaanada sida magacabista ku galay barlamaanka Dr. David Sankok, xildhibaanka laga soo doortay deegaanka Funyula Wilberforce Ojiambo , xildhibaanka deegaanka Endebess Robert Pukose iyo dhigiisa laga soo doortay bartamaha Kitui Benson Makali .
Dhanka kale gudaha aqalka senedka ee dalka ayaa warbixinta waxay sheegtay in senetarada waxqabadkooda uu aad iyoo aad uu sareeyso ay kala yihin senetarka Narok Ledama Ole Kina, senetarka Bungoma Moses Wetangula , senetarka countiga Kericho Aaron Cheruiyot iyo senetarka countiag Migori Ochilo Ayako .
← Cudurka Coronavirus oo far kulul ku hayo Dalka Mareykanka.
Prof. George Magoha oo baaq xoogan uu diray maamulayaasha iskuulada secondariga iyo Primariga. →